Igwe na-agbawa aja nke Cabinet
Ụdị igbe kabinet nkịtị akwụkwọ ntuziaka aja na-agbawa agbawa
Ndị na-emepụta igwe Ding Tai Hot Sales Environmental Small Sandblasting Cabinet Maka Ihe Nri n'elu na-ehicha ajari na nkọwa pedal:
1.Abrasive sandblasting bụ usoro ịkwanye ájá na oke ọsọ na ihe iji wepụ nchara, agba, ma ọ bụ mkpuchi ndị ọzọ.
2.Ụdị ihe ndị ọzọ na-agbawa agbawa na-adị, dị ka beads ma ọ bụ sodium bicarbonate, ma abrasive sandblasting bụ kpọmkwem usoro nke iji ájá wepụ ihe.
3.A igwe pụrụ iche dị mkpa iji mee usoro a, na onye ọrụ nke igwe na-achọkarị ịzụ ya ka ọ na-eji ngwá ọrụ ahụ eme ihe n'enweghị nsogbu na nke ọma.
4.The ọrụ ga-mkpa iyi kwesịrị ekwesị akụrụngwa nchekwa, dị ka gloves, goggles, na imi na ọnụ nkpuchi, ebe aja nwere ike imerụ ahụ ike mmadụ.
5.The usoro nke abrasive sandblasting na-amalite na prepping ebe ebe mgbawa nwere ike ime.
6.Sand ga-esi na igwe na-ebugharị ya, nke pụtara na ọ ga-adị mkpa ka onye ọrụ ahụ chebe mpaghara gbara ya gburugburu.
7.N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eme usoro ikpochapụ ájá ájá na gburugburu ebe dị n'ime ya nke ọma na-eku ume, si otú ahụ na-enwe ájá na ihe mkpofu niile.
8.N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa ịkwanye akwa akwa ma ọ bụ plastik iji kpokọta ájá ejiri mebie ma chebe ebe ndị ọzọ na nso nso.
Ndị na-emepụta igwe Ding Tai Hot Sales Environmental Small Sandblasting Cabinet Maka Ihe Nri n'elu Na-ehicha nchara na ngwa pedal:
1.Sand ịgbawa igwe kwesịrị ekwesị maka niile metal, plastic na iko ngwaahịa elu ọgwụgwọ.
2.Wepụ oxide akpụkpọ, residues burrs na scratches nwere ike iji maka mma ìhè, matte na ike njikwa.
3.Clean na ebu,polishing na atomization ọgwụgwọ nke metalwork ebu,organic iko na ndị ọzọ articles.It atụmatụ ya tungsten ígwè nozulu na ogologo ọrụ ndụ.
Nchacha ihe mgbawa gụnyere:
1.There nwere usoro nkewa nke cyclone na usoro mkpofu uzuzu, nkewa ga-ekewapụ abrasive na ígwè.
2.Dust iwepụ usoro nwere ike na-emeso na-anakọta na emit na-abaghị uru uzuzu, na ike vibrating ọcha uzuzu na-akpaghị aka.Uzuzu na-ewepụ mmetụta dị mma, belata ọnụ ahịa abrasive ma melite arụmọrụ, na enweghị mmetọ gburugburu ebe obibi.
3.Suction ájá ịgbawa kabinet bụ adabara n'elu ọgwụgwọ nke niile ngwaahịa nke metal, plastic na iko ect.Wepu oxide akpụkpọ.
Ndị na-emepụta igwe Ding Tai Hot Sales Environmental Small Sandblasting Cabinet Maka Ihe Nri n'elu Na-ehicha Rust na Pedal Technology Data:
Pịa - N'ụdị ájá na-agbawa igwe data teknụzụ
ngwaike, electronic, ebu na ụfọdụ obere workpiece elu nchara ihicha,
Deburring, deburring, descaling, ihicha n'elu agba, ugbu a n'ọtụtụ ebe
eji maka spraying,electroplate pretreatment usoro welie mkpuchi
(plating) elu Adhesion.
Ụdị nrụgide dị elu
Onye na-anakọta uzuzu ọkụ eletrik (ụdị katrij nzacha)
Onye na-achụpụ ihe
Ìhè idei mmiri
50W-LED ihe mgbawa ọkụ
Nkewa nke Cyclone
Valve ụkpụrụ nrụgide
Filter + Akpata Mgbapụta
1 Ụzọ abụọ
Ngwa dị obere voltaji
304 igwe anaghị agba nchara
Ripple White + Lemọn Yellow (agba ụgbọ ala)
Akwụkwọ ntuziaka (Siphon na-aga n'ihu na-agbawa)
Obere ogbunigwe nchara, iko ogbugba / aja, seramiiki ogbunigwe / aja, corundum Brown, ọcha corundum wdg.
Ding Tai Ndị ọzọ Usoro igwe:
Banyere ụlọ ọrụ Ding Tai:
Ding Tai Machinery Co., Ltd bụ a nnyocha na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, echichi, ọrụ na ahia na otu diversified enterprise.
1.Shot igwe na-agbawa ọkụ / Ngwá ọkụ ọkụ:
(1) .Spinner hanger gbara ogbunigwe igwe / nko ogbugba ogbugba igwe
(2) .Roller ebuga ogbugba ogbugba igwe
(4) .Wire ntupu belst gbawara igwe
(5) .Catenary nkwusioru na-agafe igwe agba agba agba
(6) .Mgba ọkụ gbawara agbawa igwe
2.Shot peening igwe
3.Sand agbawa igwe
4.Sand gbawara ụlọ na akụkụ wdg.
6.Steel shot media wdg.
1.Surface ihicha ebe: nkedo, forging, okpomọkụ ọgwụgwọ, tupu ulo oru akụrụngwa mkpuchi elu ihicha.
3.Industrial dedusting mpaghara wdg.
A: Anyị bụ factory.
Igwe eji agba aja aja 5-15 ụbọchị ọrụ.
Igwe na-agbawa agbawa bụ ụbọchị ọrụ 15-90.
Igwe peening gbara agba bụ ụbọchị ọrụ 60-120.
ọ bụ dị ka ọnụọgụ na igwe nlereanya.
Ajụjụ: Ị na-anwale sample n'efu?
A: Ọ bụrụ na maka ogbugba ịgbawa ihicha ule, Ee, anyị na-anwale sample maka free.Ma ị ga-enye ibu.
Mana maka ule ike ịgba égbè, ị ga-enye ule ahụ n'efu.
A: Ịkwụ Ụgwọ <= 10000USD, 100% tupu oge eruo.Ịkwụ ụgwọ> = 10000USD, 40% T / T tupu oge eruo, itule
Ajụjụ: Gịnị bụ ogbugba agbawa igwe?
A: Mgbawa agbawa bụ usoro eji ehicha, wusie ike (peen) ma ọ bụ nchacha ọla.A na-eji mgbawa ọkụ
n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-eji ígwè, gụnyere ikuku, ụgbọ ala, ihe owuwu, ụlọ ọrụ,
ụgbọ okporo ígwè na-ewu ụgbọ mmiri, na ọtụtụ ndị ọzọ.A na-eji teknụzụ abụọ eme ihe: mgbawa wheel ma ọ bụ ikuku gbawara agbawa.
Ajụjụ: Gịnị bụ ọrụ gị mgbe ịre ahịa?
A: * Injinia gaa na nrụnye ụlọ ọrụ ndị ahịa.
* Ọzụzụ ka esi etinye igwe.
* Ọzụzụ ka esi eji igwe.
* Ndị injinia dị maka igwe ọrụ na mba ofesi.
Q: Kedu ihe bụ ọrụ ịre ahịa mbụ?
A: * Ajụjụ na nkwado ndụmọdụ.
* Nkwado nnwale nlele.
* Nkà mmụta sayensị na teknụzụ
* Anyị na-eleta ụlọ ọrụ ndị ahịa na mkparita ụka
* Ndị ahịa gaa na ụlọ ọrụ anyị ma lelee mmepụta anyị.
Q: Ogologo oge ole ka nzaghachi ire ere gị gachara?
A: Na 0-24 awa.
Q: Gịnị bụ igwe nhazi eruba gị?
A: Raw material to waya ịcha ka CNC nhazi ka ịgbado ọkụ ka eserese na-agbakọta na-agbalị na-agba ọsọ
na mbukota na mbupu wdg.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nkọwa nke ndị na-emepụta igwe Ding Tai Hot Sales Environmental Small Sandblasting Cabinet For Beverage Surface Cleaning Rust With Pedal, Nabata ịjụ anyị:
Nke gara aga: H Beam Steel Structure Shot Blasting Machine
Osote: Site n'ụdị igwe na-agbawa agbawa
Q326EA obere mgbọ ogbugba ogbugba igwe / gbaa ...
Igwe na-agbawa obere crawler
Waya ntupu ebufe Belt Alloy Wheel Industrial ...
Akpaaka Steel waya ntupu eriri ihe ebufe ụdị Sh...
Igwe ọkụ n'ime mgbidi aja
Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Nko abụọ Abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị agba, abrator, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, Hook Polisher Abrator, Ngwaahịa niile